Nahoana no tsy misy 777 ho an'ny P3D V4?
fanontaniana Nahoana no tsy misy 777 ho an'ny P3D V4?
1 taona 2 volana lasa izay #894 by Josh13215
Hatramin'ny daty dia tsy afaka mahita asa fanampiny 777 ho an'ny P3D V4 aho. Na hoe 'tsy misy famerenana hita' na tsy manohana P3D V4. Misy olona manana asa fanampiny 777 ho an'ny V4?
1 taona 2 volana lasa izay #896 by Gh0stRider203
Voarakitra vitsivitsy talohan'izay izany. Maro ny fiaramanidina tsy hiasa amin'ny P3D V4 satria mbola tsy noforonina izy ireo. Ity misy adihevitra roa hitako.
1 taona 2 volana lasa izay #899 by Josh13215